Top 10 Talooyin iPhone Security
Password iyo nidaamka ammaanka ayaa had iyo jeer lagu arko in ay dhibaato saamayn ku kombiyuutarada oo kaliya, iyadoo nidaamyada hawlgalka Windows-ku saleysan in ay ka badan tahay si ay u weeraraan badan wax soo saarka Apple, laakiin tirada dadka kordhaya isticmaalayso telefoonada smart si ay u fuliyaan maalin ka maalin arrimaha gudaha oo kale sida bangiyada iyo biilka bixinta qalabka waxaa soo socda weerar ku kordhaya.
Tiro sii kordhaysa ee dadka hadda waxa ay isticmaalaan dabacsanaan ah Apps casriga ah si ay u fuliyaan macaamil maaliyeed badan. Apps sii daayay ay bangiyada waaweyn iyo hay'adaha kale ee dhaqaale sida PayPal u oggolaan in dadku ay u helaan xisaabaadkooda halka ku dhaqaaqo si uu u hubiyo kafado iibsanaya iyo xitaa fuliyaan xawaalad oo maalin walba ah sida bixinta biilasha iyo Xawaaladaha kala xisaab. Laakiin macaamil ganacsi kasta oo laga yaabo in fursad u tahay xogta shakhsi loo goostay oo laga yaabo isticmaala dadka aan la ogalayn in ay helaan xisaab iyo baahida loo qabo ammaanka ayaa ah nin aan ka weyn. IPhone ayaa lagu uuraysan sida qalab kala duwan xal halkii sida telefoonka gacanta, oo markii danbe ammaanka ayaa mar walba safka hore ee ay design iyo hawlgalka. Laakiin iyadoo dambiileyaasha sii kordheysa u qalloocan yahay isku dayayaan in ay baacsan doonaan qalabka, isagoo ammaanka saxda ah ayaa ah nin aan aad u muhiim ah.
Qaybta 1. Talooyin Top 10 iPhone Security
Qaybta 2. Common iPhone Arrimaha & Qaraarada
Waxaa jira qaar ka mid ah tallaabooyinka muhimka u ah ammaanka iPhone heli karo, aan ugu yaraan, scanner faraha alla wixii galay isagoo ku iPhone 5 ah.
Ammaanka Astaan ​​ayaa noqonaya mid ka mid ah hubka ugu weyn ee dagaalka ka dhanka ah helitaanka aan la ogolayn. Lahaanshaha codsiga jirka ah sida faraha ama IRIS scanner waxay yaraysaa khatarta ah helitaanka aan la ogolayn meelgaarka ahaa tan iyo muuqaalada shaqsi sida, kuwaas oo si fudud aan loo labalaabka karo oo ku sii jiri doonaa si caddaalad ah wax badan oo joogto ah la user habboon.
2.Enter habayn ah
Waxay arrintu u muuqataa mid aad u fudud, laakiin ammaanka iPhone waa dhagan oo ku filan si looga hortago wax kasta oo ay helaan dheeraad ah haddii habayn ah oo aan galay. Iyada oo aan jid lahayn wareega this piece asaasiga ah ee ammaanka, iyadoo habayn, waxaad telefoon wax faaiido qof kale, oo aan xadid u tuug danaystayaal ah runtii mudan. Dabcan, shaki la'aan, waa in aad doorato u habayn ama aan dhalashadaada.
3.Set auto qufulka
Waxay u ekaan kartaa aasaasiga ah, laakiin dad badan ayaa weli ha isticmaalin hawlaha ammaanka aasaasiga ah laga heli karo iPhone. Feature auto qufulka wuxuu dhigaa iPhone soo galeen gobolka hab hurdo ka dib markii tiro ka mid ah daqiiqo ee kicida, iyo waxay u baahan password user-dhigay ah si loo soo nooleeyo qalabka. Iyada oo hab fudud wareega qufulka lahayn, ammaanka asaasiga ah waxay kaa caawin doontaa ka joojiya tuugo caadi ah.
The Raadi My iPhone App fadraal oo dhan iPhone waa wanaagsan at. Isku darka A ee ammaanka App la GPS, ka hel My iPhone waa in lagu dhejiyaa iyo firfircoonaan telefoonka kasta. Fikradu waa mid fudud; haddii uu kaa lumo telefoon ama xaday, aad u helida goobta ay ku dhabta ah markii internet-ka, iyo waxa ay raad. App wuxuu u baahan yahay ugu yaraan iOS5 iyo goobaha yar in la dardargeliyo laakiin mar ku sameeyey gudbin doonaa calaamad ah oo dhan markii ay ku leedahay nolosha iyo batari, la auto qufulka sidoo kale ku wareegay, waxa aan la faragaliyay karo by tuug. Waxaa lagu hagaajin karo in samatabbixin signal aamusan ama beep kaa caawinaya in aad ka helaysaan - xitaa marka telefoonka ugu weyn ayaa lagu wadaa inuu aamusan yihiin - sidaas Haddii aad lumiso ama xaday, hel My iPhone id gabal muhiim ah software.
Ammaanka 5.Enable Wi-Fi
Adigoo aan xiriir Wi-Fi aamin tahay sidii adigoo dhammaan xogta aad ka soo adduunka oo dhan si ay u arkaan. Waxay u muuqan kartaa mid fudud, laakiin dadka badan oo aan awood u amaanka iyo hab maamuuska ku habboon ee ay telefoonka marka xidhiidhinaya baro Wi-Fi oo ah kan loo waydiiyo inaad telefoonka iyo xogta ay afduubeen. IPhone ayaa had iyo jeer ku dhaliyay doonaa a password Wi-Fi, oo waa in aad hubiso in aad magaca joogta ah xiriir Wi-Fi si ammaan ah si looga hortago in helitaanka aan la ogolayn. Waxaa kale oo lagu talinayaa in, sida la Bluetooth, aad gab Wi-Fi marka aad ha u baahan tahay oo ku saabsan sida lakabka dheeraad ah ammaanka.
Xogta 6.Encrypt hayaan.
Waa macno si loo abuuro si joogto ah u soo xulay xogta telefoonada aad si PC ama Mac, laakiin in abuuri karaan dhibaatooyin u gaar ah. By gelinaya xogta oo dhan gal qalab kale ka dhigan tahay in aad weli lagu weeraray karo waxaa aad iyo aad macluumaad shakhsiyeed oo miino oo ay qaar ka mid ah dembiyada aan damiirka lahayn. Waa inaad had iyo sir xogta aad u soo xulay si ay kaliya akhrin karo by qalab adiga kuu gaar ah yihiin oo noqday aan waxtar lahayn ahaayeen qof inay helaan aad mashiinka. Encryption Data waa mid ka mid ah fursadaha caadiga ah ee dib-up iPhone interface oo aad loo xaqiijiyo waa in aad had iyo jeer ayaa waxaa u suurta.
Software 7.Use Adda
Iyada oo fayrusyada computer oodhan si gaara loogu talagalay in ay taranto casriga noqday badan yihiin, waxaa lagama maarmaan ah in aad u software anti-virus lagu kalsoonaan karo. Waa in aad u adkaysataan in aad cusboonaysiiso si nidaamka ugu dambeeyay ee hawlgalka Apple si ay uga caawiyaan dagaalka godad nidaamka, laakiin rakibi ooday in la baaro emails socda iyo software bixi.
8.Be taxadir leh auto-Connect Apps
Ma maqashay ee garaac? Waa App ah loogu talagalay wareejinta xogta effortless iyo halka waxay noqon kartaa mid xiiso leh qaar ka mid ah codsiyada warbaahinta bulshada, waxay noqon kartaa qarow aad ammaanka. Guud ahaan, haddii aad qiimeeyaan ammaanka iPhone ee, fogaadaan u Apps wareejinta xogta si toos ah sidan oo kale ama ma garan kartid waxa aad gudbinta.
Software sugneeyn 9.Avoid.
Iyadoo websites badan oo bixiya software codsiyada ugu badan ee aad ka xusuusan karto, waa wax aad u fudud oo dhan si ay u soo bixi wax sameeya in ka badan oo aad ka filan. Haddii ay ka il sugneeyn un ama software si cad burcad badeeda, waa in aad ka fogaadaan haddii kale waxaad halis u ah tiriska aad telefoon iyo xogta si ay halisyo aan loo baahnayn. Isticmaal software kaliya oo laga helay ilo lagu kalsoonaan karo.
10.Avoid links Wadal
Ayaa dad badan oo aad ku dari sida saaxiibo oo la wadaajiyo u badan tahay in aad tahay si aad u hesho link ah Wadal, in email ah in muddo karto masiibo aad iyo aad u iPhone. Your macruufka updates iyo software antivirus hanjabaad inbound samayn doonaa, laakiin guud ahaan, ma ay badbaadin karto wax aad riix laga yaabaa, si xeerka guud ee ha furin haddii aad hubto khusaysaa.
1. iOS7 WallpapDeath xajin.
QABASHADA iPhone 4 hab gaar ah sababay soo dhaweynta geeso in ay hoos u eber. Apple soo jeediyay in labada iibsato $ 30 oo qiimaheedu kiiska soo go'ay, ama qabashada telefoonka ee "dabacsan" hab dheeraad ah (fiiri sawirka). Reception ayaa horumar ku wajahan qaababka ka dib.
Camera 2.Rear si fiican u shaqaynayn.
Dad badan ayaa ogaaday in inta aad qaadanaysid sawir leh camera gadaal in shutter ee dalwaddii u muuqataa si aad u hesho dhegto. Mararka qaarkood waxaa laftiisa baaba'o, mararka qaarkood waxa uu noqonayaa mid joogto ah. Haddii tani kugu dhacdo, qaado telefoon si Bar hanad iyo weydiiso qiimaha u dhalato ah. Ama kaliya kamarad isticmaalo waxay u jeedinta hore.
Galaas 3.iPhone 4 cuncun-breaky
Inkastoo ay dalab Apple ee in ay tahay weyn adag ka badan oo caag ah, iPhone 4 ahaa si xun u nugul jabiyay galaas. The dawo dhabta ah oo kaliya waa Buur qalab aad kiis Patriots iyo isku day in aadan hoos aad u badan.
Talooyin Isticmaalka iPhone sida Camera Security ah
> Resource > iPhone > Top 10 iPhone Amniga Talooyin & Common iPhone Arrimaha iyo Qaraarada Security